MUUQAAL: Madaxwaynaha Puntland oo gaadhay degmada Galdogob iyo Wuxuu kala kulmay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Madaxwaynaha Puntland oo gaadhay degmada Galdogob iyo Wuxuu kala kulmay
Aug 5, 2020 - 9 Aragtiyood
Galdogob ( Kalshaale ) Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa galabta xadhiga ka jaray Wado cusub oo laga hirgeliyay degmada Galdogob ee gobolka Mudug.
Wadadan cusub oo laami ah dhererkeeduna yahay 1.6 KM, Waxay halbowle muhim ah u noqonaysaa Isu socodka Bulshada degmada Galdogob.
Madaxweynaha ayaa bogaadiyey dadaalka Masuuliyiinta Dowladda oo kaashabaya Hay’addaha USAID, ay ku bixiyeen in dhismaha wadadan sidii loogu talagalay u hirgalo.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa markii uu wadada xadhiga ka jaray ku dhex lugeeyay magaaladda isagoo wakhti la qaatay bulshada Qeybaheeda kala duwan.
Bal gabadhaas ila daawo.
Maaha mooryaan hiraab iyo kablalax aka ugaarsato.
Horta Gabadhu waa xildhibaan,xaqbay u leedahay doodeeda,laakiin Beesha Mutuood xaq uma laha inay ka hadlaan doorashada.Waxaa kale oo ka hadlikara doorashada Xisbiyad Mucaaridka.Haseyeeshee,Xildhibaanka Somaliya,ma yahay qof gaadhsiisan inuu Xildhibaan noqdo?
Tani joonyad Basbaas ahna ma maamulikarto.Hadda waa Basbaas hooyadeed leedahay kkk
Bal Gabadhan u fiirso,sidii ay Islaamihii jaarka u sheekaynayso,meesha soo fadhida ee aad moodo Qof aaanu Xilba saarnayn.Yeey u dacwoonaysaa?
Iyada ayay ahayd shaqadeeda inay qabato.Waxayba iska dhigaysaa qof meesha iska jooga.
Haa,waa run.way muuqataa inay tahay qof meesha iska joogtay ama iskaba maqanayd, haatana Xildhinaabada eeda saaraysa kkkkk
Waan ka xumahay in dadka sidaa u hadlayaa yihiin kuwii laga rabay inay wadanka dawlad u dhisaan.
Waa xildhibaanadii tuuray qaabkii hore ee doorashada loo diyaaray ee iayagu mid kale samaystay,kaasi oo ah ka haatan laysku hasyto.
waaba yaabe,maxaa looga dhigayaa si somaliya maanta qaribantay?
Yaa la eedaynaa?
Doorashada 2 sano ayaa dib loo dhigay,si loo helo qaabka ugu fiican ee wax loo dooranay.Maxaa idinka xumaanaya?
sawtii aad xoolo iska ahaydeen hadaad somalitihiin.
Nin qoyan oo biyo iska dhawraya.Waabad qoyantahay biyaha mar qudha isku shub.
Waxaan kugula talin lahaa inaad ogaato in Somalidu Mooryaan noqotay.Hadii uu Fromaajo ku dhaafo,yaa badalaya?
xasan sheekh oo Ina Cabdi rashiid ka dhigay Raysal wasaare intii uu xabsi gaynlahaa,mise sheekh shariif oo na yidhi,maba ogayn meesha ay somaliya kaga tanaasushay xaduudeediii Badda?
Waar Islaantan Golahii shacabka sidan uga sheekaynasa,maxaad ka dhegaysa.
Mise Muraariadii ayaa kugu kaliftay inaad shaqsi walba wax ka dhegysato?
dee bal shirka Mutulood ha noo goaamiyo doorashada.
Waxaan kugula talin lahaa hadaad rejo ka leedahay dowlad somaliyeed. In aad muduloodka si hoose u sii barato. Maxaa yeelay waxaan kaa muuqdo aqoon la.aan beesha nabadda iyo dulqaadka somaliya.
Muduloodku waa dad nabadeed.
Waa dad jecel dowladnimo.
Waa dad kuraastooda dad kale uga koco si loo helo dowlad somaliyeed.
Waa dadka ugu dulqaadka badan somaalida.
Isku day tijaabi in aad meelaha aad ku nooshahay kuleey mudulood way joogane aad xiriir la sameyso.
Bal dadkaas u fiirso waad jecleysan.
Waa dad xadaariyiin ah.
Waa dad la dhaqmi karo bulsho kasto.
Waa dad aad weligaa la nolaan karto. Ayagoon ku waydiin reerka aad tahay.
Anigu malihi dhaqan abgaal.
Waxaan ahay qabiili.
Waxaan ahay. Reer woqooyi iyo reer koofur.
Reerku Hadana wax xun ma sheegin.
Siyaasiyiintoodu wexey dheheen. Doorasho halla qabto. Hadii waqtigu dhamaado.
Hadaan la qaban karina talada wax hanalaga waydiiyo. Dee taas qof walbo oo siyaasi ah wuu dhihi lahaa.
Walaahi bilaahi talaahi.
Madaxweyne farmaajo qof ka liito in uusan somaliya soo marin.sidaan aaminsanahay.
War horta Mr bahaloow.
Adu ma nacasbaad baad tahay.
War qofkaan xanuunsanaayo maxaad salaada ugu xiratay?
Weli miyaad aragtay qofkaan oo inta meel soo istaagay siraganimo leh u hadlay..
War qofkaan weli waxaa laga la.yahay waxaad rabto noo sheeg waan kugu diideynaa ama waan kugu raacaynaa.
War qofkaanu farahiisa kalama yaqaan.
Waa iska aamusan yahay.
Hadii xaalku xun yahay shib.
Hadii qarax dhoco shib.
Hadii muwaadin la dhiibo shib.
Hadii dalkii doorashadiisa lagu wareersan yahay shib.
Hadii raisulwasarihii la tuuray shib.
Isagu lacag ayuu bixiyaa oo dadka ayuu dhahaa wax qora.
Sheekh shariif. Meel iga dhig. Waa miskiin daacad ah..daacadna maanta looma baahno.
Ninyahoow. Madaxweyne gurguurte. Weeye madaxweynaha maanta somaliya u baahan tahay.
Ninkaas ayaa siyaasi ah.
Ninkaas ayaa taarged leh.
Ninkaas ayaa rugcadaa ah.
Adigu dhaqanka somalida aqoon badan uma lihid.
Hadaad aragti. NIN hawiye ah oo daroodku amanaayo. Iska ilaali waa nacas salaad cali jeelle oo kale.
Hadaad aragti siyaasi hawiye ee daroodku neceb yahay. Ninkaasu waa ninrageed oo waa nin taarged leh.
Waa nin aan wixii la doono la marsiisan Karin.
Waa u taagan danaha somaliya.
Waa exmadaxweyne xasan sheekh oo kale. Ha moogaan.
Farmaajo waa baxayaa kor iyo hoos.
Taas Aniga meel iiga qor.
Qabyo ninkeed halla soo celiyo
Waxaa dad ugu liita quf aan aqoon uu wax cabrio la heyn hadana ay qabyaadadi indho tirtay ookiyaalaha uu wax ku arkana uu yahay jifadeydaa gar leh miisaankiisuna yahay unnukaa xaq leh unnukaa zoog leh unnukaa xadaarad leh .war gurguurte iyo shariff waa la soo tijaabiyey weyna fashilmeen .shariff badii buu gatay ee meel ha noogu sheego,gurguurtana dad iyo dalba waa gatay gabdhihii1’600 ahaa sacuudiga haka soo celiyo mise 40 million buu ku badashay .duf kubaxe mar danbe golaha kalshaale waxaas hawga hadlin waa hadaad rajo iska qabto. Faarax gololey baa yaabay alaha u naxariistee
Akhyaarey, shaqsigani ma idiinla egyahay nin Fiyoow? Aniga waxaa iiga muuqata in la asiibay Magaci loo Baxshay 2BA MIIRRE.≈©≈Abwaan baa midkale ku yiri; ”
Dabkaad hurin habeen iyo dharaar holacyadaad oogi
Halna kuma tereyside dadkaad ku hawiraysaaye
Aduunbaase hor Eebbiyo la tegi halaci naareed”
≈©≈WAR hooy, caqligeenu wuxuu nasiin INAY; Dir, Daarood iyo Raxanweyn la joogi Hawiye ILAA JOWMUDDINE Kacoo Qur-aan halay saaro DHEH, cidna waxba uma dhimi kartide. WBT
Mahadsanid talada aad i siisay.
Horta anuu Formaajo iyo maamulkiisa uma taageero si aan tayda u eegto.Dan anuu aan leehay uma taageero.Haa,danta guud
ee Somaliyeed qayb ayaan ka ahay,waana midda ugu fiican in la taagreero,laakiin dan shaqiyan ah uma taagreero.Walee in aanan dan aan leehay meelhaasi ka raadinayn.Danta guud oo hagaagta ayaa ugu wanaagsan.Sidaa ayaan u taageeraa.
Dee hadii uu Madaxwaynuhu yahay qof xanuunsan sida aad sheegtay,waa in aan caawinaa oo garbaha qabanaa.Maaha in aan meelahaasi ka cayno,sorry Mr.Garqaad.
Ummmada somaliyeed midno ayay kaga gudbi kartaa xaaladan ay ku jirto,midnimo ayay kaga gudbikartaa Nacasnimadan ku habsatay.Midnimo ayay kaga bixikartaa ka taqaluska danaha shaqsiga ah ee hor taagan dadtii guud ee somaliyeed.
Mutulood waxay rabaan inay wax somaliyeed ka dhigaan wax Mutulood.
Arintan waxaa hogaaminaya rag Mutolood ah oo ku socda siyaasada qabiilka ku dhisan.Guusha ay ka gaadhaan siyaasadaasi qabiilka ku dhisani,waxay dumindoontaa dantii guud wadanka.
waxaa xigidoona ragaasi oo taajira,dantii somaliyeed oo dunta iyo dantii Mutulood oo dhimata – saa danta Mutlood waxay ku xidhantahay dad guud ee somaliyeed.
Xasan sheekh dantiisa ayuu u dhexfadhiyaa shirka Mutulood.rajo ma laha meel qabiil lagu hogaaminayaa – mana yeelandoonto.Waxaa soo bixidoona 30 jir 30 milyan haysta kkkkk
Garqaad iyo Dabshid
Waa laba nin ama hal nin oo Iidoor ah, hadalkaa iga gunta… Ma la socotaan Issaq badan oo ree xamar ku dhashay kuna soo barbaaray inay dunida dhoobanyihiin, kuwaas oo yaqaan lahjadda ree koofur iyo taariikhadahab…
Awal shaki baa igaga jiray waxa ku qasbaya maanat nin Abgaal ahi inuu ku hadlo afkii snm, lkn imminka baaritaankaygu wuxuu i leeyahay kuma qaldanayn shakigaa…
Ree koofur waa laga dhex adeeganayaa… SNM CBB in the haouse….
@Garqaad abti waad isku daasheen.
Ma aqaan caddaalad ayaan rabnaa iyo doorasho ha dhacdo dhibka ay leedahay?
1-Muddulood xaq bay u leedahay soo jeedin,xaqse ama awood uma lahan fulinta.Fulinta waxaa iska leh gudiga doorashooyinka iyo dawaladda.
2-Isimsaa beelood baa shiray?HG,MR inta aan la socdo,waxaa ugu hadalo xumaa MR oo qof islaam dhiigiisa banaystay Axmed madoobe.
Ninkaas ma ahan isaga iyo jifadiisaba ugaas shaqo kuma lahan.Wuxuu ahaa askari koofiya cas baxsaday 1988 kuna biiray xertii boqol soon,koofiya cas ayaa dhaawacday kadib waa la iska daayay Xamar kama soo bixin waliguus mar diin ku qaraabo mar afmiinshaarnimo ku qaraabto.
Markii ugu darnayd AU Abdullahi Yuusuf soo cayriyay jiiskan kuna yiri reer GARAAD ugaasnimo shaqo kuma lahan ee yaan la ii keenin.
Ninka waa ninkii Xasan Sheekh lahaa na dhaaf gabarna waa kuugu daraynaa,waan soo ogaaday odayaal wax loo tuuraayay oo laga reebay ayuu ku jiray fursadaan ku helay kkk 3 xaas ayaa Xamar u dagan.